Uphando luthi ... | AmaShishini amaNcinci amaNtlalontle
NgeCawa, uJuni 12, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Lorraine Ibhola
Ukuthetha nabanini bamashishini abancinci malunga nemithombo yeendaba zentlalo kubonakala ngathi kukho umdla okhulayo phakathi njengoko beqala ukushenxisa imisebenzi yentengiso kude nesiko ukuya kwimidiya yoluntu.
Iziphumo zethu zokuqala ezivela kuvavanyo lwethu lweendaba zentlalo zibonakala zibonisa abanini bamashishini, amadoda nabafazi bachitha ixesha elininzi kwimidiya yoluntu mihla le. (Amadoda achitha ngakumbi nangakumbi ngabafazi). Olu lutshintsho olukhulu kunyaka ophelileyo xa besifunda okokuqala.
Imigca ebomvu nebomvu ibonisa iziphumo ezivela kufundo lwethu lowama-2010. Njengoko ubona, malunga nesiqingatha sawo onke amadoda nabasetyhini abaphendula kwisivumelwano sethu bathi bachitha ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ngosuku kwimidiya yoluntu. Kulo nyaka, imigca eluhlaza okwesibhakabhaka kunye neetal ibonisa ngokucacileyo ukutshintsha kwexesha elichithwe kwiinethiwekhi zentlalo. Phantse i-50% yamadoda anika ingxelo achitha ngaphezulu kweyure enye ngosuku
Ngelixa linomdla, umbuzo wokwenyani: Ngaba iyasebenza? Idatha ibonakala ibonisa ukuba kunjalo. Ngelixa ngaphezulu kwesiqingatha sabanini bamashishini kolu phando lwalo nyaka besabonisa iiakhawunti zeendaba zentlalo ezingaphantsi kwe-5% yentengiso yabo iyonke, kukho iinkampani ngokucacileyo ezifumana impumelelo ethile.
Benza ntoni ukuvelisa ukuthengisa? Kuya kufuneka ulinde yonke idatha ekufuneka yenziwe ukuze ufumane.
Okwangoku, ukuba khange ufumane thuba lokuthatha inxaxheba, ngoku lixesha elihle, uphando luza kuthatha imizuzu embalwa, kwaye abaphenduli ngakumbi banomdla ngakumbi kwiziphumo. Ukuba ugqibezela uphando, ndiza kukuthumela ikopi yephepha elitsha elimhlophe xa lipapashwa.
Thatha iSaveyi ngoku
Kwaye ukuba ungathanda ikopi yamaphepha amhlophe kwisifundo sonyaka ophelileyo, ungayifumana apha:
Juni 13, 2011 ngo-2: 54 AM
Uvavanyo olunje luluncedo kakhulu kwaye luluncedo kwaye nabani na angathatha inxaxheba kuba imithombo yeendaba zentlalo ikuyo yonke indawo nakuwo wonke umntu. Kodwa ke, sele ndindwendwele indawo enxulumene nayo eyashwankathela ingxelo yamanani yamadoda nabasetyhini besebenzisa imithombo yeendaba zentlalo kwaye isiphumo kukuba uninzi lwabasetyhini luchitha ixesha elininzi kunamadoda. Nangona kunjalo, njengoko ndikhumbula ukuba yathetha ngenye i-niche hayi ngeenjongo zokuthengisa ishishini ngolu hlobo. Enkosi ngolwazi.